Tadalafil- Warshad alaab-soo-saare soo saare
CMOAPI waxay leedahay agab buuxa oo ceyriin ah oo ka mid ah Tadalafil, waxayna leedahay nidaam maamul oo tayo sare leh.
Waa maxay Tadalafil
Tadalafil waa dawo dhakhtar qoro oo loo isticmaalo daaweynta erectile dysfunction (ED) iyo astaamaha qanjirka 'prostate' ee ragga. Waxaa sidoo kale lagu muujiyey in lagu daaweeyo dhiig karka sambabada (PAH).
Tadalafil (Lambarka CAS: 171596-29-5) waxaa lagu helaa qaab kiniin afka ah ama budada tadalafil oo badanaa lagu iibiyo magaca calaamadda Cialis (cillad aan caadi ahayn ama balaarin qanjirka 'prostate') ama Adcirca (dhiig karka sambabaha). Tadalafil sidoo kale waxaa lagu heli karaa qaabkiisa guud kaas oo laga yaabo inuusan laheyn dhammaan awooda sida qaabeynta asalka ah
Sidee buu u shaqeeyaa tadalafil?
Tadalafil waa mid ka mid ah ka hortagayaasha fosfodiesterase nooca 5 (PDE5). Marka kooxahan daroogada ah ay joojiyaan PDE5 iyaguna waxay sii xoojinayaan shaqada kacsiga.
Inta lagu guda jiro kacsiga galmada, kacsiga wuxuu dhacaa marka socodka socodka dhiigu ku filan yahay xididdada guska taasoo keenta xididdada dabacsan iyo muruqa siman ee corpus cavernosum. Jawaabtan waxaa dhexdhexaadinaya soo saarista nitric oxide (MAYA) unugyada endothelial iyo dareemayaasha. Sii deynta MAYA waxay sare u qaadeysaa isu-soo-baxa 'guanosine monophosphate cyclic' (inta badan loo yaqaan 'cyclic GMP' ama 'cGMP') ee unugyada muruqyada siman. GMP-ka wareega wuxuu caawiyaa nasinta muruqyada jilicsan wuxuuna kordhiyaa socodka dhiigga ee corpus cavernosum.
Tadalafil wuxuu xakameynayaa nooca fosfodiesterase nooca 5 (PDE5) adoo kordhinaya xaddiga cGMP. Waxaa xusid mudan in qofku la kulmo kicinta galmada si loo bilaabo sii deynta dabiiciga ah ee nitric oxide. Tani waa sababta oo ah saameynta Tadalafil ma dhici doonto la'aan kicinta galmada.
Tadalafil wuxuu yareyn karaa astaamaha qanjidhada qanjirka 'prostate' ee weynaaday oo ay kujiraan kaadi dhaqso / soo noqnoqosho, dhiigbaxa oo ku adkaada, iyo kaadi ceshan la'aanta kaadida. Waxay tan ku gaadhaysaa iyadoo nasinaysa muruqyada qanjirka 'prostate' iyo kaadi haysta.
Dhiig-karka sambabada, tadalafil wuxuu caawiyaa nasinta xididdada dhiigga ee xabadka. Tanina waxay gacan ka geysaneysaa kordhinta bixinta dhiigga sambabaha waxayna sidoo kale yareyneysaa culeyska shaqada ee wadnaha.
Nidaamka soo saarista tadalafil (CAS 151596-29-5), dhexdhexaadiyeyaasha qaarkood ayaa la sameeyay. Shirkadaha qaarkood waxay isticmaali doonaan tadalafil dhexdhexaad si ay u soo saaraan tadalafil.
Tadalafil (CAS 171596-29-5) waa dawo dhakhtar qoro oo wax ku ool ah oo loogu talagalay daaweynta cillad aan caadi ahayn iyo ballaadhinta qanjirka 'prostatic' ee ragga iyo sidoo kale dhiig karka sanbabada.
Cas 171489-59-1 sidoo kale loo yaqaan 'Chloropretadalafil' waa mid dhexdhexaad ah soo saarista Tadalafil oo loo adeegsaday daaweynta cillad aan caadi ahayn. CAS 171489-59-1 wuxuu leeyahay qaaciddada moodeelka ah ee C22H19ClN2O5 oo leh culeys molikal ah oo ah 426.85 g / mol. Waxaa lagu heli karaa qaab adag oo cad.
CAS 171752-68-4 oo qaaciidadiisa moodeelku yahay C20H18N2O4.HCl iyo culeyska molikiyuulka ee 386.83 g / mol sidoo kale waa tadalafil dhexdhexaad ah.
Waxaa jira alaab-qeybiyeyaal badan oo ka mid ah kuwa dhex-dhexaadinta 'tadalafil' kuwaasoo bixiya tadalafil dhexdhexaad si loogu iibiyo qiimaha tartanka. Si kastaba ha noqotee, markaad tixgeliso tadalafil inaad ka iibsato shirkadaha aaminka ah si loo hubiyo in tayada aysan ka koobnayn.
CMOAPI waa mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha dhexe ee tadalafil oo dammaanad qaadaya tayo wanaagsan iyo qiime tartan ku saabsan alaabtooda.
Yaa iyo sida loo isticmaalo tadalafil
Budada Tadalafil waxay daaweyn kartaa waxyaabaha soo socda ee ragga?
Cilad la'aanta erectile (ED) sidoo kale loo yaqaan 'impotience' waa xaalad ragga ku jirta oo aysan awoodin inay helaan ama sii wadaan kacsiga waqti ku filan oo ay ku galaan howlaha galmada. Badanaa waxay u horseedaa xiisaha galmada waxayna sidoo kale sababi kartaa cilado kale sida dhicis ama soo daahid shahwo mararka qaarna awoodin inay gaarto kacsiga.
ED waxaa sababi kara sababo badan oo jir ahaan iyo xaalado shucuur labadaba sida cudurada qaarkood sida sonkorowga, cudurka wadnaha, iyo dhiig karka, da'da, walbahaarka, ama xitaa arimaha xiriirka.
Tadalafil wuxuu ka caawiyaa daaweynta ED adoo kordhinaya qulqulka dhiigga ee guska. Tani markeeda waxay caawineysaa in la gaaro oo la sii wado kacsiga. Si kastaba ha noqotee, tadalafil waxay kaliya ka caawisaa kacsiga marka mid horeba loo kiciyo galmo.
Qanjirka 'prostatic hyperplasia' (BPH)
Sidoo kale loo yaqaan balaarinta qanjirka 'prostate', BPH waa xaalad caadi ah oo badanaa laga helo ragga markay da 'weyn yihiin. Si kastaba ha noqotee, dhowr arrimood oo kale ayaa u horseedi kara qanjirka 'prostate' oo ay ku jiraan sonkorowga iyo cilladaha wadnaha, qaab nololeedka, iyo gaar ahaan cayilka iyo sidoo kale taariikhda qoyska ee BPH. Marka qanjirka 'prostate' uu weynaado waxay u horseedi kartaa xaalado kaadi ah.
Calaamadaha lagu garto qanjirka 'prostate gland' ee balaaran ayaa ah, deg deg deg deg ah oo soo noqnoqda oo kaadida ah, oo ay dhib ku noqoto bilaabida kaadida, kaadida oo daciifta ah, ama awood la'aanta in kaadiheysta si buuxda u faaruqiso. Calaamadaha kale ee BPH waxaa ka mid noqon kara infekshinka mareenka kaadi mareenka (UTI), ma awoodo inuu kaadiyo, ama dhiig kaadida ku jira.
Budada Tadalafil ama kaniiniga ayaa kaa caawiya nasinta muruqyada qanjirka 'prostate' iyo kaadi haysta. Tani waxay kaa caawinaysaa yareynta astaamaha BPH.
Halbowlayaasha sambabada dhiig karka (PAH)
PAH waa xaalad uu dhiig kar ka jiro xididdada dhiigga siiya sambabaha. Way ka duwan tahay dhiig karka caadiga ah. Waxay dhacdaa marka xididdada wadnaha ilaa sambabaha noqdaan kuwo cidhiidhi ah ama xanniban.
Calaamadaha ugu caansan waxaa ka mid ah xabad xanuun, daal, ama xitaa barar lugahaaga iyo anqawyadaada.
Tadalafil wuxuu kaa caawin karaa yareynta calaamadaha PAH adoo nasinaya xididdada dhiigga ee sanbabada oo si isdaba joog ah u kordhiya socodka dhiigga.
Sidee loo isticmaalaa tadalafil?
Qiyaasta tadalafil waxay kuxirantahay da'daada, isticmaalka loogu talagalay, iyo wixii kale ee caafimaad ee salka ku haya.
Isticmaalka Tadalafil laguma talin karo carruurta da'doodu ka yar tahay 18 sano jir halka sidoo kale dadka ka weyn 65 sano ay tahay inay aad u taxaddaraan maaddaama jirkoodu muddo dheer ku qaadanayo inuu dhuuqo daawooyinkan.
Waxaa jira tilmaamo cad oo ku saabsan sida loo isticmaalo budada tadalafil laakiin qaabka ugu caamsan ayaa ah kiniinka tadalafil ee ka hooseeya magacyada noocyo kala duwan.
Waxaa lagugula talinayaa inaad qaadato tadalafil hal mar maalintii oo aad qaadato qiyaastii isla waqtigaas maalin kasta si aad uhesho faa'iidooyinka tadalafil.
Qiyaasta tadalafil ee adeegsiga kala duwan ayaa lagu qeexay;
Cilad kacsi, qiyaasta 2.5-5 mg ayaa maalin kasta la qaataa ama 10 mg markii la qaato hal mar markii loo baahdo.
Xanuunka qanjirka 'prostatic hyperplasia', qiyaas 5 mg ah oo maalin kasta la qaato ayaa lagula talinayaa. Tadalafil waa in la qaataa hal mar maalintii.
Markaad la macaamilayso labada xaaladoodba (cillad aan caadi ahayn iyo qanjirka 'prostate') qiyaas ah 5 mg maalintii ayaa habboon.
Dhiig karka sambabada, qiyaasta tadalafil ee 40 mg ah oo maalin kasta la qaato ayaa la soo jeedinayaa.
Sida daroogooyinka kale, waxa midkood u shaqeeya laga yaabee inuusan ku sameynin mid kale. Beddelka Tadalafil ayaa jira. Si kastaba ha noqotee, waxa ugu fiican ee la sameeyo ayaa ah inaad kala hadasho dhakhtarkaaga wixii ku saabsan beddelka tadalafil ee la heli karo oo la arko midka adiga kugu habboon. Waxaa lagugula talin karaa inaad qaadato waxyaabaha kale ee loo yaqaan 'tadalafil' haddii aad xasaasiyad ku leedahay tadalafil ama sababo kale awgood.
Waa masuuliyadaada inaad ogaato waxa si fiican kuugu shaqeynaya intaad ka saareyso tadalafil waa doorashada ama saameynaha tadalafil ee waxtarka u leh faa'iidooyinka tadalafil.
Waa maxay farqiga u dhexeeya Tadalafil iyo daawooyinka kale ee cillad aan caadi ahayn
Cialis waa daawo qoro oo ka tirsan fasalka daawooyinka loo yaqaan Phosphodiesterase-5 Enzyme Inhibitors. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo astaamaha cillad la'aanta kacsiga. Waa la isticmaali karaa keligiis ama waxaa lagu dari karaa dawooyin kale.
Daawada loo yaqaan 'Dapoxetine hydrochloride' waxaa lagu sifeeyay inay tahay mid si dhakhso ah wax u qabta serotonin reuptake inhibitors (SSRIs).
Dapoxetine hydrochloride waa daawo diiwaangashan oo loo isticmaalo in lagu daaweeyo biya baxa degdega ah. Biyo-baxa degdega ah waa xaalad aad ugu badan ragga oo ku lug leh awood la'aanta daahitaanka biya baxa. Tani waa astaamaha lagu garto kacsiga ragga.
In kasta oo tadalafil iyo dapoxetine hydrochloride labadaba loo isticmaalo in lagu daaweeyo astaamaha cillad aan caadi ahayn, mid ka mid ah tadalafil waa fosfodiesterase inhibitor halka kan kale, dapoxetine, uu yahay xulasho celiyaha serotonin xulashada.
Vardenafil waa dawo ku jirta koox daroogo ah oo loo yaqaan 'phosphodiesterase (PDE) inhibitors'. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cillad la'aanta ragga. Markuu ninku kacsi dareemo, vardenafil waxay kordhisaa qulqulka dhiigga ee guska taas oo markaa kuu xaqiijinaysa inaad kacsan tahay.
Vardenafil oo lagu iibiyey magaca astaanta ah ee 'Levitra' ayaa aad looga xushay sildenafil iyo tadalafil (Cialis) ilaa PDE5. Tani waxay si fudud u macnaheedu tahay in qadar yar oo ah vardenafil looga baahan yahay waxyeelo yar oo suurtagal ah.
Farqiga kale ee xusida mudan ayaa ah nolosha nuska ah halka vardenafil (Levitra) uu leeyahay nus nus saacadaha 4-6 halka tadalafil (Cialis) uu leeyahay nolol badhkeed oo ah 17.5 saacadood. Tani waxay ka dhigan tahay in Tadalafil (Cialis) uu u dhaqmo in ka badan vardenafil.
Avanafil waa daawo ka tirsan kooxda fosfodiesterase inhibitors. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cillad la'aanta erectile iyadoo la hagaajinayo socodka dhiigga ee gobolka guska.
In kasta oo avanafil iyo tadalafil ay labaduba yihiin kahortagayaasha fosfodiesterase, avanafil ayaa ah tan ugu cusub uguna yar nuska nolosha qiyaastii 5 saacadood marka loo eego tadalafil oo leh nolol badhkeed oo ah 17.5 saacadood.
Gabagabadii, tadalafil way kafiican tahay nolosheeda nuskeed. Mid ayaa dawada u qaadan kara waxyeelooyin yar oo suurtagal ah.
Tadalafil Waxyeellada iyo faa'iidooyinka
Qaar badan oo tixgeliya isticmaalka budada tadalafil waxay u iibsadaan sababo la xiriira faa'iidooyinkeeda ugu weyn ee tadalafil;
Daaweynta cillad la'aanta kacsiga
Kacsiga xubinta taranka galmada waa geedi socod muhiim u ah howlaha galmada. Cilad kacsi waxay dhacdaa marka ninku awoodi waayo inuu kaco oo uu dayactiro. Tani waxay keentaa arrimo badan sida murugo, qaddarin hoose, iyo xitaa dhibaatooyinka xiriirka.
Kacsiga waxaa la gaaraa marka socodka dhiigu ku filan yahay xubinta taranka. Tadalafil wuxuu gacan ka geystaa yareynta astaamaha cillad la'aanta kacsiga iyadoo kordhinaysa socodka dhiigga ee guska.
Daweynta astaamaha qanjirka 'prostatic hyperplasia'
Qanjirka 'prostatic hyperplasia' waxaa sidoo kale loo yaqaan 'qanjirka' qanjirka 'prostate' Tani waa xaalad si dabiici ah u dhacda da'da. Marka qanjirka 'prostate' uu weynaado, wuxuu tuujiyaa kaadi mareenka. Qaar ka mid ah astaamaha la xiriira qanjirka 'prostate' ee la ballaadhiyey waa; Kaadi degdeg ah oo soo noqnoqota, adag tahay in la bilaabo kaadi, kaadi xanuun badan iyo kuwa kale.
Tadalafil wuxuu ka faa'iideystaa ragga la ildaran cudurka qanjirka 'prostatic hyperplasia' isagoo yareeya astaamahan. Budada Tadalafil waxay gacan ka geysataa in la dabciyo qanjirka 'prostate' iyo sidoo kale kaadiheysta sidaa darteed waxay yareysaa astaamaha la xiriira kaadi haysta iyo kaadi mareenka oo la cadaadiyo.
Daweyn karaa cillad aan caadi aheyn iyo qanjirka 'prostatic hyperplasia'
Tadalafil wuxuu kaloo ka caawin karaa ragga qaba dhibaatada erectile iyo qanjirka 'prostate gland' isku mar.
Markaad u isticmaashid tadalafil qiyaasta saxda ah iyo sida lagugula taliyay inaad goosato faa'iidooyinka la sheegay. Maaddaama aan kor u qaadayo qulqulka dhiigga ee guska iyo sidoo kale meelaha kale, waa hab caafimaad leh oo lagula tacaali karo xaaladahaas.
Sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa daaweynta calaamadaha dhiig karka sambabaha
Dhiig karka sambabada (PAH) asal ahaan waxaa loola jeedaa inuu jiro cadaadis dhiig oo sareeya xididada dhiigga ka qaata wadnaha ilaa sambabada. Si kastaba ha noqotee way ka duwan tahay cadaadiska dhiigga caadiga ah.
PAH waxay dhacdaa marka xididdada dhiigga u fidisa sambabaha ay noqdaan kuwo cidhiidhi ah ama la xannibay taasoo keenta in wadnaha lagu qasbo inuu dhiig ku shubo heer sare. Qiyaasta xawaaraha wadnaha ah ee degdega ah iyo qasabka ah waxay keentaa cadaadis xad dhaaf ah oo ku dhaca halbowlayaasha.
Budada Tadalafil waxay la yaabtaa adoo nasinaya xididdada dhiigga. Nasashadaani waxay u oggolaaneysaa socodka dhiigga oo habsami leh sidaas darteed waxay kordhisaa xaddiga socodka. Tani waxay ka caawineysaa wadnaha inuu ku shubo dheecaanka dhiigga sidaas darteed wuxuu yareeyaa cadaadiska haddii kale isku uruuri lahaa
Waxay hagaajineysaa awoodaada jimicsiga
Inta lagu jiro jimicsiga socodka dhiiggu waa muhiim si loogu oggolaado mid inuu helo oksijiin ku filan iyo sidoo kale inuu abuuro tamar ku filan oo loo baahan yahay.
Tadalafil waxay kor u qaadi kartaa waxqabadka jimicsiga adiga oo labadaba nasinaya xididdada dhiiggaaga iyo kordhinta socodka dhiigga.
Saameynaha ugu badan ee tadalafil waxaa ka mid ah;
biyo raacis (diirimaad, guduudasho, ama dareen jilicsan),
cufan ama sanka oo qulqulaya, iyo
murqo xanuun, dhabar xanuun, iyo xanuun gacmahaaga ama lugaha ah.
Tadalafil wuxuu sidoo kale u horseedi karaa waxyeelo aad u daran. Waxaa lagugula talinayaa inaad raadiso gargaar caafimaad haddii aad la kulanto mid ka mid ah dhibaatooyinka soo socda ee tadalafil;
qaar ka mid ah calaamadaha wadnaha oo ay ku jiraan xanuunka laabta, xanuun ku fida daanka ama garabka, lallabbo, iyo dhidid.
aragga oo isbedela oo ay ku jiraan aragga oo xumaada ama arag la'aan ah.
Maqal la'aanta gudaha
dhagahaaga maqal iyo maqal la'aan
Kacsiga oo xanuun leh ama soconaya wax ka badan 4 saacadood maadaama ay taasi dhaawici karto guskaaga.
Wadna garaacsanaan la'aan
Suuxdin, wareer iyo,
Daal aan caadi ahayn.
Isdhexgalka Daroogada ee Tadalafil
Dhowr isdhexgal oo tadalafil ah oo lala yeesho daroogooyinka kale ayaa la soo sheegay. Isdhexgalka daroogada ayaa badiyaa badalaya shaqada daawooyinka waxayna ka hor istaagi karaan daawooyinka inay si fiican u shaqeeyaan.
Sidaa darteed waxaa si weyn lagula talinayaa in laga wada hadlo daawooyinkaaga kahor intaadan isticmaalin tadalafil. Qaar ka mid ah isdhexgalka tadalafil waxay noqon karaan kuwo khafiif ah iyo kuwo kale oo xun.
Hoos waxaa ku yaal isdhexgalka tadalafil;
Waxaa sidoo kale loo yaqaan daawooyinka Anguina. Marka Nitrate-ka la wada qaato tadalafil, waxay sababi kartaa cadaadiska dhiigga inuu hoos ugu dhaco heerar aad u hooseeya. Heerka hoose ee cadaadiska dhiigga ayaa lala xiriiriyaa astaamo sida dawakhaad ama xitaa miyir beelid.
Qaar ka mid ah daawooyinka anguina waxaa ka mid ah; butyl nitrite, amyl nitrite, isosorbide dinitrate, nitroglycerin, iyo isosorbide mononitrate.
Kuwani waa daawooyin loo isticmaalo sixitaanka dhiig karka. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa daaweynta qanjirka 'prostate'. Tadalafil iyo alfa-blockers labadaba waa vasodilatoriyeyaal leh saamaynta yareynta cadaadiska dhiigga. Marka la wada isticmaalo, waxay ku dambayn kartaa hoos u dhac xoog leh / cadaadis dhiig oo sarreeya. Tani waxay keentaa qofku inuu noqdo dawakh iyo sidoo kale inuu suuxo.
Qaar ka mid ah daawooyinka alfa-xannibaadaha waxaa ka mid ah; terazosin, tamsulosin, alfuzosin, iyo prazosin.
Daawooyinka HIV qaarkood
Daawooyinkani waa kuwa horjoogsada kahortaga oo markaa waxay kordhin karaan heerka tadalafil ee dhiiga. Kordhintaan waxay keeneysaa cadaadis dhiig oo hooseeya. Waxay sidoo kale ku keeni kartaa indho-sarcaad ragga ah taas oo macnaheedu yahay inay helaan kacsi dheeri ah oo badanaa xanuun badan.
Daawooyinkaan qaarkood waa ritonavir iyo lopinavir.
Isdhexgalka Tadalafil iyo antibiyootikada ayaa la soo sheegay. Markii lala qaato tadalafil, antibiyootiko waxay kordhin kartaa heerka tadalafil ee dhiigga taasoo keenta hoos u dhigidda cadaadiska dhiigga. Isaga wuxuu sababi karaa dawakhaad, suuxdin, iyo xitaa arrimaha aragtida qaarkood. Waxay sidoo kale ku keeni kartaa priapism ragga.
Daawooyinkaan qaarkood waa erythromycin, telithromycin, iyo clarithromycin.
Si kastaba ha noqotee, antibiyootikada qaarkood waxay yareyn karaan heerarka tadalafil ee dhiigga ku jira. Isdhexgalkaan tadalafil-ka ahi si sax ah uma shaqeeyaan. Daawooyinkaas waxaa ka mid ah; rifampin.
Qaar ka mid ah daawooyinka antifungal ee afka laga qaato oo ay ku jiraan ketoconazole iyo itraconazole waxay la falgalaan tadalafil.
Daawooyinkani waxay kor u qaadi karaan heerka tadalafil taasoo u horseedda dawakhaad iyo miyir beelid sidoo kale way dhici kartaa.
Daawooyinka kale ee dhiig karka sambabada
Tadalafil iyo dawooyinka kale ee dhiig karka sambabada ayaa lagu yaqaan inay leeyihiin saameyn dhiig kar-yareyn ah. Markii la wada isticmaalo waxay u horseedi kartaa heerar hoose oo khatar dhiig kar ah. Tani waxay keentaa calaamadaha la xiriira cadaadiska dhiigga oo hooseeya sida dawakhaad iyo miyir beelid.
Daawooyinka waxaa ka mid ah riociguat.
Ka hortagga dawooyinka lidka-dawada
Daawooyinkan waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo aashitada caloosha. Marka loo isticmaalo isku dhafka 'tadalafil', waxay hor istaagi karaan nuugista tadalafil ee jirka. Waxay ka mid yihiin magnesium hydroxide ama aluminium hydroxide.
Kuwani sidoo kale waxaa loo yaqaan dawooyinka kahortagga qalalaasaha. Markaad wada qaadanaysid dawooyinka kahortaga qalalaasaha ee loo yaqaan 'tadalafil', waxay hoos u dhigi karaan nuugista tadalafil. Tani waxay ka dhigan tahay in tadalafil uusan si fiican u shaqeyn karin. Daawooyinkan suuxdinta ah waxaa ka mid ah phenytoin, phenobarbital, iyo carbamazepine.
Xagee laga iibsadaa Tadalafil?
Waad ka iibsan kartaa Tadalafil dukaamada internetka. Budada waxaa loo heli karaa jumlad ahaan cilmi baarayaasha iyo falanqeeyayaasha. U hubso inaad hubiso alaab-qeybiyeyaasha la oggolaaday ee budada tadalafil.Markaad tixgelinayso inaad qaadato tadalafil ka iibso iibiyeyaasha lagu kalsoon yahay.
La tasho dhaqtarkaaga caafimaad kahor intaadan qaadan tadalafil sababo la xiriira dhibaatooyinka soo raaca tadalafil iyo sidoo kale isdhexgalka tadalafil daawooyinka kale.
Haddii aad raadineyso Tadalafil ama dhexdhexaadiyayaasheeda, waa inaad ka hubisaa CMOAPI saad sax ah oo alaab saafi ah. Xeryahayagu waxay soo mareen hubin tayo leh.
S ： Miyuu tadalafil ka xoog badan yahay Viagra?
J: 'Sida loo baahan yahay' Tadalafil (generic Cialis) wuxuu ka faa'iideystaa Sildenafil inuu muddo dheer sii dheeraado - illaa 36 saacadood (marka loo barbardhigo 4-5 saacadood Sildenafil). Ragga qaar ayaa doorbida tan maadaama ay u oggolaaneyso isbadal badan.
S: Cialis ma kugu adkeysaa markay timaado ka dib?
J: Ha qaadan haddii aadan u baahnayn. Waxay sababi kartaa dhaawac culus.
Caadi ahaan ka dib markaad timaaddo wali waa mid xasaasi ah xasaasiyadda ka dib, inta badanna lama taaban karo, laakiin dhowr daqiiqo ka dib oo kaliya diirimaad diirinta markaa way sii socon kartaa.
S: 20mg Cialis miyuu badan yahay?
J: Qiyaasta ugu badan ee Cialis ee la qaadan karo maalintii waa 20 mg. Waa inaadan qaadan Cialis wax ka badan hal jeer maalintii. Tijaabooyinka bukaan socodka, Cialis waxay ka caawisay dadka qaba astaamaha ED ilaa 36 saacadood qiyaasta ay qaateen. Markaa haddii aad u qaadanaysid dawada sida loogu baahan yahay oo keliya, maahan inaad maalin walba u qaadato.
S: Maxaa sifiican uga shaqeeya viagra ama Cialis?
J: Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya Viagra iyo Cialis waa xaddiga waqtiga ay waxyeellooyinkoodu sii socdaan. Viagra wuxuu sii shaqeynayaa 4 ilaa 6 saacadood, taas oo bixisa fursad ku filan oo aad galmo ku sameysid dhowr jeer haddii aad rabto. Si kastaba ha noqotee Cialis waxay caadi ahaan kuu oggolaaneysaa inaad ku guuleysato kacsiga illaa 36 saacadood ka dib qaadashada kiniin.
S: Muddo intee le'eg ayuu celcelis ahaan ninku joogi karaa?
J: Kacsiga wuxuu socon karaa daqiiqado yar ilaa nus saac. Celcelis ahaan, ragga waxay leeyihiin shan kacsi habeenkii markay seexdaan, mid walbana wuxuu qaadanayaa 25 ilaa 35 daqiiqo.
S: Da'dee ayay ragga ku dhib qabaan inay adkaadaan?
J: Qiyaastii boqolkiiba 5 ragga da'doodu tahay 40 sano jirku waxay leeyihiin cillad kacsi oo dhameystiran, tiradaasina waxay kordheysaa ilaa 15 boqolkiiba ragga da'da 70. Qalitaan fudud oo dhexdhexaad ah wuxuu saameeyaa qiyaastii 10 boqolkiiba ragga tobankii sano ee nolosha (ie, 50 boqolkiiba ragga ragga 50, 60 boqolkiiba ragga 60 jir).
S: Immisa jeer ayuu ninku sii daayaa shahwada toddobaad gudihiis?
J: inta aad caafimaad qabtid, caafimaad ahaan waxaa lagaa rabaa inaad soo saarto shahwad 3dii maalmoodba mar ilaa 1 usbuucii waa 7 maalmood, marka aragtida dhakhtarkaaga aad ayey muhiim u tahay inaad ku amarto waqtiga haddii cillad jirto.
S: Waa maxay cunnooyinka kaa caawinaya inaad ku adkaato?
J: Spinach waa isha ugu weyn ee folate, oo ah dhiig yaqaan caan ku ah-kobcinta. Folic acid-ka ayaa door muhiim ah ka ciyaara shaqada galmada galmada iyo yaraanta folic acid-ka ayaa lala xiriiriyay ilaha aaminka ee cillad kacsi.
Daraasado la sameeyay ayaa lagu ogaaday in laba ilaa saddex koob oo kafee ah la cabo maalintii ay ka hortagi karto cillad kacsi. Tani waxay ku mahadsan tahay maaddada kafee ee aadka loo jecel yahay: kafeyn.
Waxaa laga helaa maraqa kulul iyo basbaaska basbaaska, capsaicin wuxuu kiciyaa sii deynta endorphins - hoormoonka "dareemo wanaag" - wuxuuna dib u soo celin karaa libido.
S: Miyuu tadalafil kordhiyaa testosterone?
A; Daaweynta PDE5I tadalafil ee usbuucyada 12 waxay la xiriirtay kororka testosterone / estradiol iyo kor u qaadista shaqada. Tadalafil sidoo kale wuxuu awood u leeyahay inuu kordhiyo heerarka serum LH, yareeyo cytokines proinflammatory, iyo inuu yareeyo wadarta guud ee dufanka caloosha.
S: Cialis miyuu ka fiican yahay tadalafil?
A: Daraasado ayaa muujiyay daawada tadalafil iyo magaceeda ganacsi Cialis inay leeyihiin heer guul ah oo ah 60-70% daaweynta ED. Tadalafil (generic Cialis), waa sido kale waxtar.
S: Caadada tadalafil ma sameysmeysaa?
J: Ma jiraan wax caddayn cilmi ah oo muujinaya in sildenafil, tadalafil ama dawooyin kale oo loo isticmaalo in lagu daaweeyo cillad aan caadi ahayn ay yihiin kuwo la qabatimay
S: Miyaad ku qaadan kartaa tadalafil aalkolo?
J: Ha cabin qaddar xad dhaaf ah oo aalkolo ah (tusaale, 5 ama in ka badan koob oo khamri ah ama 5 ama in ka badan oo xabbo oo ah 'whiskey') ah marka aad qaadanayso tadalafil. Markii si xad dhaaf ah loo qaato, khamrigu wuxuu kordhin karaa fursadahaaga madax xanuun ama wareer, wuxuu kordhin karaa garaaca wadnahaaga, ama wuxuu yareyn karaa cadaadiska dhiiggaaga.
S: Cialis maalin kasta ma kordhisaa testosterone?
A: 5 mg tadalafil maalin kasta si weyn ayuu u hagaajiyay ED sababtoo ah wadarta heerarka testosterone oo kordhay.
S: Maxaa dhacaya haddii tadalafil uusan shaqeyn?
A; Haddii tadalafil iyo kuwa kale ee kahortaga ee PDE5 aysan adiga kuu shaqeyneyn, bixiyahaaga daryeelka caafimaad wuxuu soo jeedin karaa xulashooyin kale oo daaweyn ah oo ay kujiraan (AUA, 2018): Daaweynta testosterone: Baaritaanka dhiigga wuxuu muujinayaa heerar testosterone hooseeya. Cirbadaha guska: Alprostadil iyo daawooyin kale.
S: Maxaa dhacaya haddii aad qaadato tadalafil aad u tiro badan?
J: Haddii aad qaadatid tadalafil aad u badan ama aad wada qaadato dawooyinkan, fursadda waxyeellooyinku way ka sarraysaa. Haddii aad la kulanto kacsi dheer in ka badan 4 saacadood ama kacsi xanuun badan in ka badan 6 saacadood, isla markiiba la xiriir dhakhtarkaaga.
S: Tadalafil ma nabad baa?
A: tadalafil ma tahay daawo badbaado leh? Guud ahaan, tadalafil waa daawo badbaado leh laakiin laguma talinayo in la qaato haddii aad leedahay shuruudo gaar ah ama aad qaadato daawooyin gaar ah oo laga yaabo inay la falgalaan tadalafil.
S: Casiirka Cabiraabka miyuu kufiican yahay cillad la'aanta kacsiga?
J: Macluumaadka caafimaadku ma dhameystirna, laakiin ragga qaata Viagra waa inay ogaadaan in casiirka canabku uu kor u qaadi karo heerarka dhiigga ee daroogada. Taasi waxay u noqon kartaa wax u wanaagsan ragga qaarkiis cillad kacsi, laakiin waxay kicin kartaa madax xanuun, biyo qabatin, ama cadaadis dhiig oo hooseeya.
S: Sideen uga dhigi karaa tadalafil inuu sifiican ushaqeeyo?
J: 1. Lahow miisaanka caafimaadkaaga adigoo yareynaya cabirka qaybaha, cunista cuntooyinka oo dhan, iyo xulashooyin caafimaad qaba.
2.Jooji sigaar cabista iyo isticmaalka waxyaabaha kale ee tubaakada.
3.Kordhi dhaqdhaqaaqa jirka si ay kaaga caawiso yareynta dhiig karka iyo kolestaroolka badan.
S: Mudo intee le'eg ayay tadalafil ku qaadataa inay shaqeyso?
J: Badanaa waxay ku qaadataa 30 illaa 60 daqiiqo tadalafil inay u shaqeyso cillad kacsi. Waad qaadan kartaa hal mar maalintii, ugu yaraan 30 daqiiqo kahor intaadan galmo rabin.
S: Miyaan qaataa Cialis subixii ama habeenkii?
J: Kiniinnada Tadalafil ee qanjirka 'prostate' la ballaariyay waxay u yimaadaan sidii 2.5mg ama 5mg. Qiyaasta caadiga ah waa 5mg, oo la qaato hal jeer maalintii. Kiniiniga waad qaadan kartaa subaxdii ama fiidkii, laakiin waxaa ugu wanaagsan inaad qaadatid isla waqtigaas maalin kasta. Dhakhtarkaaga ayaa laga yaabaa inuu ku siiyo qadar yar oo ah 2.5mg haddii aad wax dhibaato ah qabtid, sida waxyeellooyinka soo raaca.
S: Miyaan cabi karaa qaxwada leh Cialis?
J: Wax isdhexgal ah lagama helin inta udhaxeysa kafeyn iyo Cialis.
S: Cialis ma yareyn kartaa qanjirka 'prostate'?
J: Oktoobar 6, 2011 - Cialis waxaa ogolaaday FDA si loogu daaweeyo qanjirka 'prostate'. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo ragga labadaba balaariyay qanjirka 'prostate' iyo 'erectile dysfunction' (ED) isla waqtigaas.
S: Miyuu Tadalafil ka shaqeeyaa dumarka?
J: Daawadan waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cillad kacsi iyo calaamadaha iyo astaamaha BPH. Tadalafil waxaa sidoo kale loo isticmaalaa ragga iyo dumarka labadaba si loo daaweeyo astaamaha dhiig karka sambabada si loo hagaajiyo awoodaada jimicsiga.
S: Sideed ugu qaadataa tadalafil natiijooyinka ugu wanaagsan?
J: Tadalafil (Cialis) waxaa lagu heli karaa noocyo guud iyo noocyo kala duwan oo ah kiniin afka ah. Waad u qaadan kartaa Cialis hadba sida loogu baahdo ama hal mar maalintii, taas oo ku xidhan xaddiga iyo sida loogu qoray. Cialis waxay qaadataa 30 daqiiqo ilaa 2 saacadood inay dhaqan gasho. Waxay socon kartaa ilaa 36 saacadood.
S: Miyaan qaadan karaa tadalafil 20 mg maalintii?
J: Qiyaasta ugu badan ee Cialis ee la qaadan karo maalintii waa 20 mg. Waa inaadan qaadan Cialis wax ka badan hal jeer maalintii. Tijaabooyinka bukaan socodka, Cialis waxay ka caawisay dadka qaba astaamaha ED ilaa 36 saacadood qiyaasta ay qaateen. Markaa haddii aad u qaadanaysid dawada sida loogu baahan yahay oo keliya, maahan inaad maalin walba u qaadato
S: Miyaan qaadan karaa 2 tadalafil 5mg?
J: Tadalafil (Cialis) waxaa lagu heli karaa noocyo guud iyo noocyo kala duwan oo ah kiniin afka ah. Waad u qaadan kartaa Cialis hadba sida loogu baahdo ama hal mar maalintii, taas oo ku xidhan xaddiga iyo sida loogu qoray. Cialis waxay qaadataa 30 daqiiqo ilaa 2 saacadood inay dhaqan gasho.
S: Miyuu tadalafil kiciyaa cadaadiska dhiigga?
J: Hoos u dhigida cadaadiska dhiigga ee jirka oo dhan waa dhici kartaa maxaa yeelay tadalafil waxay nasisaa xididdada dhiigga (halbowlayaasha) jirka oo dhan. Digniinta waa in loo adeegsadaa bukaanka qaba dhiig kar hoose - tusaale ahaan, in ka yar 90/50 mmHg.
S: Waa maxay saameynta daawada ee tadalafil?
J: Madax xanuun, calool xanuun, dhabar xanuun, murqo xanuun, sanka oo xirma, dheecaan soo baxa, ama dawakhaad ayaa dhici kara. Haddii mid ka mid ah saameyntani ay sii socoto ama sii xumaato, si dhakhso leh ugu sheeg dhakhtarkaaga ama farmashiistaha. Si loo yareeyo khatarta wareer iyo madax-wareer, si tartiib ah u kac markaad ka kacayso fadhiga ama jiifka.
S; Miyaan qaadan karaa tadalafil maalin kasta?
J: Tadalafil (Cialis) waa mid ka mid ah daawooyinka ugu caansan erectile dysfunction (ED). Codsigiisa ugu weyn? Daroogadu waxay ku timaaddaa noocyo qaddar-yar oo maalin kasta la qaadan karo.
S: tadalafil ma u fiicantahay qalbiga?
J: Kadib saynisyahanada soosaaraya Viagra waxay ogaadeen daawada yareysay ED. "Waxaan haynaa caddeyn kooban oo ku saabsan tijaabooyinka aadanaha iyo daraasadaha faafa ee muujinaya in Tadalafil uu wax ku ool u noqon karo daaweynta wadnaha oo shaqeynaya,"
S: Daawada loo yaqaan 'tadalafil 5mg' ma nabad baa?
J: Qiyaasta maalinlaha ah ee 5mg tadalafil ah ayaa si badbaado leh loogu isticmaali karaa daaweynta cillad aan caadi ahayn iyo LUTS, taas oo dheereysa waqtiga daahitaanka shahwada.
S: Miyuu tadalafil yareeyaa cadaadiska dhiigga?
A: tadalafi xoogaa ayuu yareyn karaa cadaadiska dhiigga. Tani dhib kuma aha ragga badankood, laakiin saameynta 'tadalafi' ee cadaadiska dhiigga waa la buunbuuniyaa haddii tadalafi lagu qaato daroogada amooniyam. Nitrate-ka ayaa ka mid ah daaweynta ay dhakhaatiirtu u qoraan angina.
S: Miyuu tadalafil u fiicanyahay qanjidhka 'prostate'?
J: Tadalafil (Cialis) waa daawada kaliya ee ay ansixisay FDA ee BPH, sidoo kale loo yaqaan 'prostate' oo balaartay. Sidoo kale waa laguu qoraa haddii aad dhibaato ku qabto kacsiga ama haysashada kacsiga.
S: Tadalafil miyuu kaa dhigayaa mid sii dheeraada?
J: Daawooyinkee ayaa ugu waqtiga dheer? - Cialis (tadalafil). In kasta oo, Viagra ay tahay dawada ugu badan ee loo yaqaan 'erectile disfunction', Cialis waxay leedahay saamaynta ugu dheer ee ugu dambaysa Cialis sidoo kale waxay ku lug leedahay qorshayn yar laakiin dhibaatooyinka soo raaca sidoo kale way sii dheeraan karaan sidoo kale.
S: Miir bambeelmo ma ka dhigayaa Cialis mid xoog badan?
J: Cunitaanka canabka ama cabitaanka cabitaanka canabka ayaa kordhin kara heerarka tadalafil ee dhiigaaga. Tani waxay sare u qaadeysaa halista waxyeellooyinkaaga.
S: Waa maxay farqiga u dhexeeya Cialis iyo Tadalafil?
J: Liis dheer oo shirkado ah ayaa FDA-loo ogolaaday inay soo saarto tadalafil si loogu daaweeyo ED iyo BPH. Noocyada guud ee Cialis ee ay ansixisay FDA ayaa si isku mid ah waxtar iyo ammaan u ah magaca sumadda Cialis. Noocyada guud ayaa badanaa ka yar kala bar qiimaha.
S: Ma jebin karaa Cialis kala badh?
inta aad caafimaad qabtid, caafimaad ahaan waxaa lagaa rabaa inaad soo saarto shahwad 3dii maalmoodba mar ilaa 1 todobaad usbuucii waa 7 maalmood, marka aragtida dhaqtarkaaga aad ayey muhiim u tahay in laguu cadeeyo waqtiga haddii cillad jirto.
Penedones A, Alves C, Batel Marques F (2020). "Khatarta nonarteritic ischemic optic neuropathy oo leh fosfodiesterase type 5 inhibitors: dib u eegis nidaamsan iyo falanqayn meta" Acta Ophthalmol. 98 (1): 22–31. doi: 10.1111 / aos.14253. PMID 31559705.
"FDA waxay ku dhawaaqeysaa dib-u-eegis lagu sameynayo calaamadaha loogu talagalay Cialis, Levitra iyo Viagra". Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka (FDA). 2007-10-18. Laga keydiyay asalka markay ahayd 2016-10-22. La soo celiyey 2009-09-28.
"Cialis tadalafil PI". Maamulka Alaabta Daaweynta. La soo celiyey 2020-08-19.
Karabakan M, Keskin E, Akdemir S, Bozkurt A (2017). Saameynta daawada tadalafil 5mg ee maalinlaha ah ee ku saabsan waqtiyada biyo baxa, calaamadaha kaadi mareenka oo hoos u dhaca iyo shaqada kacsiga ee bukaanka qaba cillad aan caadi aheyn. International Braz j Urol: Joornaalka Rasmiga ah ee Bulshada Barashada Cudurka Uroloji. 2017 Mar-Apr; 43 (2): 317-324. DOI: 10.1590 / s1677-5538.ibju.2016.0376.
"Plit Splitting" (PDF). Warbixinnada Macaamiisha Caafimaadka. 2010-01-25. Laga keydiyay asalka (PDF) 2008-10-08.
Wang Y, Bao Y, Liu J, Duan L, Cui Y (Janaayo 2018). "Tadalafil 5 mg Hal mar Maalintii waxay hagaajineysaa Calaamadaha Cudurka kaadi-mareenka Hoose iyo Qalitaanka Qalitaanka Qalitaanka: Dib u Eegis Nidaamsan iyo Meta-analysis". Astaamaha Kala-baxa Urin-yar. 10 (1): 84–92. doi: 10.1111 / luts.12144. PMID 29341503.